Waa maxay ujeedooyinka Sharciga Dambiyada la xiriira Galmada ee Baarlamaanka uu diiday? – Kalfadhi
Fadhigii todobaadkii hore ee xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa waxaa hareeyay buuq ka dhashay ajandaha kulanka, kaas oo ahaa akhrinta koowaad ee Hindise-Sharciyeed Dambiyada la xiriira Galmada Dumarka.
Xilhdibaannada ayaa ku tilmaamay sharcigan inuu ka hor imaanayo Diinta Islaamka, iyagoo dalbaday in dib loo celiyo, halka xildhibaanno kalena ay taageero u muujiyeen sharciga.
Ujeeddooyinka sharcigan waa waxaa kamid ah arrimaha hoos ku tixan:.
In la helo sharci looga hortegayo ama lagu yaren karo dhaqanka guracan ee dalka ku soo kordhay ee ah Galmo kufsi oo lagula kaco haweenka iyo dadka birima geydada nugul si eedeysanayaasha loogu ciqaabo fal fuxshiga ee naxariis darada ah ciqaabta ay mudan yihiina loo mariyo.
In dhibaneyaasha la kufsadayna u helaan xaq soor u qalma dhibka loo geystay.
In la helo sharci gaar ah oo lagula dagaallamayo kufsiga iyo dambiyada kale ee u muuqda galmo.
Sharcigan ayaa macnaha galmo ku qeexaya, fal jinsi oo u dhexeysa labo qofood, wuxuuna noqon karaa mid la isugu tago si qasab ah ama khayaariga. Sharcigaan waxaa lagu dhaqayaa fal jinsiyeedka qasabka ah iyo midka khayaariga ah oo aan waafaqsanayn shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee bulshada.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Ibraahim Muudeey, ayaa sheegay in iyaga ay rabaa in Dastuurka dalka u yaallay la waafajiyo Sharciga Dambiyada la xiriira Galmada Dumarka, haddii wax shareecada Islaamka khilaafaya ku jirana, Baarlamaanka ayaa laga rabaa in uu ka saaro.
“Sharciga Dambiyada la xiriira Galmada Dumarka, markii hore waxaa ku qornaa sharciga jinsiga, magaca xittaa waa la beddelay. Sharcigan cid loogu darnaanayo ma jirto”.
Dastuurka qodobka labaad waxaa ku qoran “Islaamka waa Diinta dowladda, Diin aan Islaam aheyn dalka laguma faafin karo. Lamana soo saari karo sharci aan waafaqsaneyn mabaadiida guud ee sharciga Islaamka iyo maqaasideeda.
Mudane Muudeey ayaa sheegay haddii Sharciga Dambiyada la xiriira Galmada Dumarka, uu khilaafsanyahay mabaadiida guud ee sharciga Islaamka, Baarlamaanka ayaa laga rabaa in uu diido maxaa yeelay Dastuurka ayaa sidaasi dhigaya.
“Sharcigan meelo kala duwan ayuu soo maray, xittaa gaalada ayaa loo dacwooday oo la leeyahay waala diidanyahay sharcigan. Dacwadeeda wey nasoo gaartay”, ayuu raaciyay hadalkiisa.
Inta badan xildhibaannada ayaa ku doodayay in ay khalad aheyd in Golaha la keeno ka doodida Galmo, waxaana ay dalbadeed in ciwaanka sharciga marka hore la beddelo ka hor inta aan sharciga laga doodin. Qaar kamid ah mudanayaasha ayaa sheegay in xeerka ciqaabta ay ku caddahay dambiyada kufsiga.